Nhau - dzakasiyana mhando dzealuminium pigments uye aluminium poda yekugadzirisa nzira
Seye indasitiri mbishi zvinhu, aluminium poda inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemazuva ano, uye maindasitiri akadai seanopikisa zvinhu, zvedongo alloys, uye kemikari simbi inoda kuiswa. Nekuda kwemusiyano mukugadzirwa kwemaitiro, kutaridzika pasi peiyo elektroni maikorosikopu inonyanya kuve yakadonhedzwa-yakaita uye isina kujairika. Naizvozvo, aluminium pigments ine akasiyana maitiro ehupenyu. Kupfeka aluminium poda uye aluminium sirivheri simbi mienzaniso. Tevere, ini ndinokuzivisa iwe mafomu akasiyana ealuminium pigments, iwo akasiyana maitiro ealuminium poda, yekumhara aluminium poda uye aluminium sirivheri pasita, uye nzira dzekugadzirisa mukugadzirwa kwealuminium poda.
1. Pakati pezvose zvigadzirwa zvealuminium poda zvinoshandiswa, kugadzirwa kwependi yealuminium poda (kureva pigment aluminium poda) uye puru yealuminium (kureva aluminium sirivheri) ndeimwe yenzvimbo dzayo huru dzekushandisa.
1.Pendi yealuminium poda inoreva iyo poda yealuminium iyo yakave yakatsikwa nekurapwa nealuminium particles muchimiro chemaflakes, uye iyo yepamusoro yakaputirwa uye inokodzera pigments.
2. Iyo pendi yealuminium poda ine chitarisiko chisina kujeka, ine hunhu hwakanaka hwekudzivirira hunhu, sirivheri-chena yesimbi inonamira, uye iyo yakajeka mhedzisiro yemakona akasarudzika. Iyo pigment aluminium poda yakaputirwa neakakwira fatty acid inewo zvinhu zvinoyangarara mufirimu yepende. Iko kupfeka aruminiyamu poda yekugadzira tekinoroji yakafambira mberi, iko kugadzirisa kuri kwakanaka, uye mhedzisiro yakanaka
3. Aluminium sirivheri pasita musanganiswa wekupfeka aluminium poda uye solvent. Mashandisiro ayo maitiro akafanana akafanana nekupenda aluminium poda. Nekudaro, nekuda kwenhoroondo yekushandisa mashandisiro, iko kushandiswa kwealuminium sirivheri pasita yakajairika uye kugadzirwa nekutengesa zvakakura.
Naizvozvo, iyo mbichana zvinhu zvealuminium poda ndiyo hombe mbishi yekugadzirwa kwealuminium pigments, uye haina zvimiro zvekudzivirira muviri (kuviga simba) uye esimbi Optical mhedzisiro inodiwa nealuminium pigments. Kupfeka aluminium poda uye aluminium sirivheri simbi mbiri dzakasiyana mafomu ealuminium pigments. Kupfeka aruminiyamu poda inonyanyo shandiswa kugadzira poda kupfeka, uye aruminiyamu poda inowanzoshandiswa kugadzira solvent-based kana emvura-yakavakirwa.
2. Maitiro ekugadzirisa mukugadzirwa kwealuminium poda:
1, atomization nzira
Aluminium poda atomization nzira yakakamurwa kuita mweya atomization uye nitrogen atomization.
2, nzira yekugaya bhora
Aluminium poda bhora yekugaya nzira yakakamurwa kuita nyoro bhora yekugaya uye yakaoma bhora yekugaya.
3, chip nzira
Iyo simbi aluminium inopetwa nemuchina wechip.
4, nzira yekupwanya
Uchishandisa crusher kupwanya uye kugadzira.
5. Kukuya uye granulation
Uchishandisa chigayo kukuya nekugadzira simbi yealuminium particles.
Seyakasiyana-siyana makemikari mbishi zvinhu, aruminiyamu upfu unoshandiswa zvakanyanya mu pigments, mafayawekisi, uye metallurgia maindasitiri. Tarisiro yayo yakanaka kwazvo. Kana iwe uine aruminiyamu yeupfu zvido, iwe unofanirwa kusarudza wenguva dzose mugadziri kuti utenge uye Zvine musoro uye nenzira kwayo shandisa aruminiyamu poda uye uteerere kushandiswa kwayo.